राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा जागिर खुल्यो, ८ कक्षा पास गरेकालाई पनि अवसर
काठमाडौं, २२ साउन । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा ७१ जनाका लागि जागिर खुलेको छ । वरिष्ठ प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सहायकदेखि सहयोगीसम्मका ७१ पदमा पद पुर्तिका लागि कोषले आवेदन फर्म खोलेको हो । यो जागिर...
यी हुन् विद्यार्थीलाई रोजगारी दिने एशियाकै टप कलेज, तलब न्यूनतम ६ लाख
काठमाडौं, २२ साउन । नेपालमा रोजगारी नपाउँदा ‘स्टुडेण्ट भीसा’मा विदेश जाने नेपाली युवाहरुको संख्या दिन प्रतिदिन बढीरहेकाको छ । प्रायः नेपाली युवाहरुको गन्तव्य युरोपियन देशहरु अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड र अमेरिका रहेका छन् । तर, एशियाकै...
अबैध चिनियाँ मोटरसाइकललाई कानुनी दायरामा ल्याइँदै
मुस्ताङ, २२ साउन । उपल्लो मुस्ताङका छ गाविसमा सञ्चालनमा रहेका करिब ४०० अवैध चिनियाँ मोटरसाइकललाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएको छ । सरकारी निगरानी नहुँदा लोमान्थाङ, छोसेर, छोण्हुप, चर्राङ, सुर्खाङ र घमी गाविसमा...
दमक-रवि सडक (फाल्गुनन्द मार्ग) को ट्रयाक खुल्यो
दमक, २१ साउन । झापा र मेची अञ्चलका पहाडी जिल्ला जोड्ने दमक–चिसोपानी–रवि (फाल्गुनन्द मार्ग) को सिङ्गल ट्र्याक खुलेको छ । निर्माण समितिले आज दमकमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सडकको रतुवा खोला किनारमा बाँकी रहेको चार...
चितवनका एक्काइस सहकारी खारेज
चितवन, २१ साउन । अघिल्ला दुई वर्षसम्म निस्क्रिय रहेका २१ वटा सहकारीलाई सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालय भरतपुरले खारेज गरेको छ । खारेज भएकामा बचतका छवटा, दुग्ध उत्पादकका पाँच वटा, कृषिका तीन वटा, बहुउद्देश्यीयका...
इजरायलमा नेपाली महिला कामदारका लागि रोजगारी खुल्यो, तलब महिनाको डेढ लाख
काठमाडौ, २१ साउन । नेपाल सरकारले महिला कामदारलाई सस्तो शुल्कमा इजरायल पठाउँने भएको छ । बिगत पाँच वर्षदेखि नेपाली कामदार नभित्र्याएको इजरायल सरकार अहिले आएर नेपाली महिला कामदार लैजान सहमत भएको हो । अब...
यस्तो बन्दैछ तराई-मधेस द्रुतमार्ग, अध्ययन गर्न उपसमिति गठन
काठमाडौँ, २० साउन । व्यवस्थापिका–संसद्, अर्थ समितिको आजको बैठकले काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्गको आर्थिक, भौतिक, प्राविधिकलगायत विषय अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाको सभापतित्वमा भएको...
विराटनगरमा एकहजार र पाँचसय रुपैयाँका नक्कली नोट देखिए
विराटनगर, २० साउन । रु एक हजार र पाँच सयका नक्कली नोट विराटनगर बजारमा देखिन थालेका छन् । असली नोटलाई रङ्गीन फोटोकपि मेसिनबाट रु एक हजार र रु पाँचसयको नोटको हुबहु देखिने गरी सेतो...
यी हुन् कामदारलाई धेरै तलब दिने देशहरु, जहाँ एक महिनाको न्युनतम पाँच लाख पाइन्छ !
काठमाडौं, २० साउन । रोजगारीको अभावमा दिनहुँ नेपाली युवाहरु विदेशिने गरेका छन् । नेपालको पछिल्लो गन्तव्य खाडी मुलुकलाई मानिन्छ । प्रायजसो खाडी मुलुक नै जान्छन् । तरपनि वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा तलबलाई मुख्य रुपमा हेरिन्छ...
इलाम, २० साउन । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमार्फत सरकारले लगानी गरेको रकम बालुवामा पानी भएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय इलामले दुई वर्षअघि इलाम नगरपालिकाका छजना साना युवा व्यवसायीलाई ऋण...
इन्धनको मूल्य घटेसँगै हवाई भाडा पनि घट्यो, कहाँ-कति घट्यो ? (हेर्नुस् तालिका)
काठमाडौं, १९ साउन । हवाई इन्धनको मूल्य घटेसँगै आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीहरुले हवाई भाडा घटाएका छन् । नेपाल आयल निगमले आइतबार हवाई इन्धन मूल्य घटाएपछि वायुसेवा सञ्चालक संघको मंगलबार बसेको बैठकले साउन २२ गतेदेखि लागू...
खम्बा गाडेको सात वर्षमा पनि बिजुली बलेन
भीमदत्तनगर, १९ साउन । बझाङको कोटभैरव गाउँमा खम्बा गाडेको सात वर्ष बितिसक्दा पनि गाउँलेले बिजुलीको उज्यालो देख्न पाएका छैनन् । कोटभैरव–८ ओलीवाडामा लामो समयदेखि अन्धकारमा गाउँलेले बाँच्नु परेको स्थानीयवासी दीपक अवस्थीले जानकारी दिनुभयो ।...
« 1 … 703 704 705 706 707 … 834 »